Waxaad ku jirtaa liiska caanka ah: Shiinaha ayaa u hanjabay Taiwan 'gooni-goosad'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Waxaad ku jirtaa liiska caanka ah: Shiinaha ayaa u hanjabay Taiwan 'gooni-goosad'
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Wararka Jebinta ee Taiwan • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wakiilka dawladda Shiinaha, Zhu Fenglian, ayaa hanjabaad shacbi oo adag u diray taageerayaasha madaxbannaanida Taiwan.
Shiinaha oo u hanjabay madaxda Taiwan: Kuwa khiyaameeya dalkooda hooyo ee doonaya in ay kala go’aan dalka waxa ay ku talo jiraan in ay meel xun ku dhamaadaan, waxaana hubaal ah in ay dadku iska indha tiraan oo ay taariikhda ku qiimeeyaan.
Shiinaha ayaa ku hanjabay inuu 'ciqaabayo' taageerayaasha iyo taageerayaasha madax-bannaanida Taiwan.
'Gooni-goosadka' Taiwan waxaa laga mamnuuci doonaa inay soo galaan dhul weynaha, Hong Kong iyo Macao.
'Gooni-goosadka' waxaa lagu baari doonaa mas'uuliyadda dembi iyadoo la raacayo sharciga Shuuciga Shiinaha.
Afhayeen u hadashay Xafiiska Arrimaha Shiinaha ee Taiwan ee Golaha Gobolka, iyadoo ka jawaabaysa su'aal warbaahineed oo ku saabsan tillaabooyinka ciqaabta ah ee ka dhanka ah taageerayaasha Taiwan Madaxbanaanida, ayaa lagu dhawaaqay in 'cunsurka gooni u goosadka' ay ku jiraan liiska Shiinaha ee la garaacay waxaana lagu ciqaabi doonaa 'sida sharciga waafaqsan.'
Wakiil ka socda dawladda Shiinaha, Zhu Fenglian, ayaa u diray hanjabaad dadweyne oo adag Taiwan Dadka u dooda madax banaanida, ayaa ka digay in kuwa liiska ku jira, iyo eheladooda, aysan soo gelin dhulweynaha iyo labada gobol ee gaarka ah ee maamulka. Hong Kong iyo Macao, iyo hay'adaha xiriirka la leh waa in laga mamnuucaa inay wax wadashaqeyn ah la sameeyaan ururada iyo shakhsiyaadka ku sugan dhul weynaha.
Zhu waxa kale oo uu intaa ku daray in kafaalaqaadayaashooda iyo ganacsiyada la xidhiidha laga mamnuuci doono inay ka qayb qaataan hawlaha macaash doonka ee dhul waynaha, iyo ciqaabo kale.
"Kuwa khiyaameeya dalkooda hooyo oo doonaya in ay kala go'aan dalka waxaa la filayaa in ay meel xun gaaraan, waxaana qasab ah in dadka ay diidaan oo ay xukumaan taariikhda," Zhu ayaa yidhi, isaga oo tixraacaya taageerayaasha TaiwanMadax-bannaanida, oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Taiwan Su Tseng-chang, madaxweynaha sharci-dejinta Yuan Yu Shyi-Kun iyo wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph Wu.
Kuwa ku jira liiskaas la garaacay waxaa lagu hayn doonaa la xisaabtanka cimrigooda oo dhan waxaana lagu baari doonaa mas'uuliyadda dambiga iyadoo la raacayo sharciga 'Communist China', ayuu raaciyay Zhu.